Qarax-caddayn mesh caqabad hesco - Shiinaha Hebei Meihua mesh Hardware
taxane ilaalinta Ammaanka
bowd Curvy welded
mesh caqabad hesco Qarax-caddayn
mesh ilaalinta jiirada
SNS dadban Protective net
lath feeraha Sare
fuulid dalool mesh jir
silig mandiil Concertina
Maritime Bureau Double
unit hesco concertainer ooday waa nidaam derbiga multi-gacanta ka welded Zinc-Aluminum dahaarka / galvanized kulul lagu rusheeyey mesh silig steel oo toosan, goysyada gariiradda helical biiray macmalay. The unugyada mil concertainer waxaa damacsan midkood beige ama cagaar midab culus-waajib non-leh tolmo wanaagsan goobtii polypropylene geotextile.Hesco caqabad / hesco laga buuxin karaa ciid, dhulka, sibidhka, dhagax, ka dibna sida derbi difaaca ama dhufays iyo si ballaaran loo isticmaalo ee military si ay u ilaaliyaan ammaanka. Faahfaahinta: Materi ...
The hesco caqabad unit concertainer waa nidaam derbiga multi-gacanta ka welded Zinc-Aluminum dahaarka / galvanized kulul lagu rusheeyey mesh silig steel oo toosan, goysyada gariiradda helical biiray macmalay.
The unugyada mil concertainer waxaa damacsan midkood beige ama cagaar midab culus-waajib non-leh tolmo wanaagsan goobtii polypropylene geotextile.Hesco caqabad / hesco laga buuxin karaa ciid, dhulka, sibidhka, dhagax, ka dibna sida derbi difaaca ama dhufays iyo si ballaaran loo isticmaalo ee military si ay u ilaaliyaan ammaanka.
Waxyaabaha: silig steel galvanized ama Galfan /
zinc-5% silig aluminium
Adeegga Life: 15-20 sano
Price: 19.8 $ -99.8 $ / set
Dhexroor Wire: 3.0mm- 6.0mm
Aperture: 50 * 50mm 75mm 75 *
76,2 * 76.2mm 80 * 80mm 100 * 100mm iwm
Color of geotextile: Gray iyo Militariga
Green, midabka iwm Sand
Gram Miisaanka of geotextile: 200g / m2
ama 300g / m2
Finish: kulul lagu rusheeyey galvanized, silig Galfan.
Habka welded: welded ka dib markii galvanized
ama galvanized ka dib markii welded
Xirxirida: duudduubay la film ihin ka dibna
buuxiyey oo ku yaal sariirtaada alwaax ama bir sariirtaada
Previous: bowd Curvy welded
Next: Bowd ka dhanka ah fuulid ah
Aluminum Corner kuusha Iyadoo mesh
Aluminum dalool mesh Meegaarka fuulaan
Aluminum Corner kuusha Iyadoo Maro adag mesh
dushooda iyo Wire mandiil Wire mesh Wall Spike
Leben sii xoojiyeen mesh
Leben Wall xoojiyeen welded Wire mesh
Leben Wall Wire mesh
Wareegtada Steel Bar mesh
Dhismaha Joint welded Wire mesh
Corner kuusha mesh
Galvanized fuuli dalool mesh Meegaarka
galvanized welded mandiil Wire mesh
Crooked High nijaarnimo mesh
Dalool Brick mesh
Dalool Corner mesh
PCV dahaarka fuuli dalool mesh jir
mandiil Wire mesh
Reinfocement Brick Wire mesh
Welded Brick mesh
welded mandiil dushooda iyo Wire mesh